Madaxweyna Degaanka oo London Kaga Qayb Galaya Iibka Warqadaha [Bonds] ee Maal Galinta Biyo Xidheenka Abbay. – Rasaasa News
Madaxweyna Degaanka oo London Kaga Qayb Galaya Iibka Warqadaha [Bonds] ee Maal Galinta Biyo Xidheenka Abbay.
Mar 4, 2012 ethiopia, Ogaden, ogadenia, somali region
Magaalada London March 4, 2012 waxaa ka dhacaya shir ay ka qayb qaadanayaan Qurba-joogta Somalida Ethiopia iyo Somaliweyn. Shirka waxaa loogu talo galay in lagu iibiyo warqado ay ku qoran yihiin lacago [bonds] oo lagu maal galinayo biyo xidheenka Abbayga [Abbay hydroelectric power].
Dawlada Ethiopia ayaa wada dhismaha biya xidheeka Abbay, oo ah biyo xidheenka ugu weyn qaarada Afrika, kaas oo hirgalidiisu isbadal weyn oo dhaqaale u keeni doonta guud ahaan dadweynaha Ethiopia.
Hadaba si ay dawladu u hesho lacag lagu dhiso biyo xidheenka Abbay waxay daabacday waqadaha loo yaqaan bonds oo laga iibinayo dadweynaha.
Waa maxay Bonds? Waa hanaan lagu daynsado lacag. Bons- Waa warqad u taagan qiimo lacageed, waxaana soo saara shirkadaha waaweyn iyo dawlada si ay lacag ugu helaan mashaariicda ay doonayaan in ay hir galiyaan. Bonds- waxay leedahay dulsaar lacageed oo sare, waxayna leedahay xili lagu celiyo lacagta salka ah iyo dul saarka oo wada jira.
Bonds-ku way ka gadisan tahay Saami [share]. Share-ku – waa Saami, waa warqado ay soo saaraan shirkadaha waaweyn iyo dawlada, waxaana laga iibiyaa dadweynaha. Lacagta share-ka lama celiyo laakiin iibsaduhu wuxuu wax ka yeelan shirkada soo saartay Sheerarka inta ay shirkadu jirto. Lahaansha sheerka waxaa laga yaabaa in ay isaga gudubto 10 awow iyo ka badan. Sheerka ruuxa leh wuu sii iibin karaa markuu doono, qiimaheeduna wuxuu ku xidhan yahay qiimaha shirkada.
Waa muhiim in ay dadku fahamsan yihiin iibsashada Bonds-ka, si ayna dhawaan u odhan ma fahamsanayn ama hadii aan sidaa moodayno waanu iibsan lahayn.
Waa maxay Biyo xidheen? Biyo xidheen waa dhisme laga sameeyo wabiga dhaxdiisa si loo maamula biyaha wabiga oo looga faa,iidaysto. Biyo xidheenku waa labo nooc mid looga faa,iidaysto waraabka beeraha iyo mid laga dhaliya korontada la isticmaalo. Somalidu waxay taqaan biyo xidheenka beeraha kaliya.
Si aynu u fahamno biya xidheenka Abbay, waxaynu dib u eegaynaa taariikhda biyo xidheenada dalka Ethiopia, meelaha ay ku yaalaan awooda korontada ay dhaliyaan iyo sanooyinka la dhisay.
01. Biyo xidheenka Akaki Addis Ababa sanadkii 1932 awooda 6 Megawatt.
02. Biyo xidheenka Tis Abay I wabiga Nile 1953 awooda 11.50 Megawatt
03. Biyo xidheenka Koko dam wabiga Awasha 1960 awooda 42.30 Megawatt
04. Biyo xidheenka Awasha II wabiga Awasha 1966 awooda 32 Megawatt.
05. Biyo xidheenka Awasha III wabiga Awasha 1971 awooda 32 Megawatt
06. Biyo xidheenka Fincha dam wabiga Fincha 1973 awooda 100 Megawatt
07. Biyo xidheenka Melka Wekena dam 1989 awooda 153 Megawatt
08. Biyo xidheenka Sor dam 1990 awooda 5 Megawatt
09. Biyo xidheenka Tis Abay II wabiga Nile 2001 awooda 75 Megawatt
10. Biyo xidheenka Gilgel Gibe I wabiga Omo 2004 awooda 184 Megawatt
11. Biyo xidheenka Tekeze high dam wabiga Tekeze 2009 310 Megawatt tigray
12. Biyo xidheenka Gilgel Gibe II wabiga Omo 2010 awooda 420 Megawatt
13. Biyo xidheenka Tana Beles wabiga Belesa 2010 awooda 435 megawatt
14. Biyo xidheenka Gilgel Gibe III wabiga Omo 2013 awooda 1870 megawatt
15. Biyo xidheenka Great Millennium dam wabiga Nile 2017 awooda 5250 megawatt
16. Biyo xidheenka Ashegoda mashruuca beerta dabaysha korontada dhalisa (Enderta) 2011 awooda 120 megawatt
Waxaa kale oo qorsha ku jira saddex biyo xidheen oo waaweyn oo kuwa korontada dhaliya ah oo la kala yidhaahdo; Tekeze II, Gilgel Gibe IV iyo Gilgel Gibe V. Waxaa qorsha ugu jirta Ethiopia in ay soo saarto 10,000 megawatt shanta sano ee soo socota iyo qorsha fog oo ah 45, 000 megawatt.
Sida ka muuqata shaxda kore Ethiopia waxay xooga saartaa had iyo goorba isticmaalka khayraadka dabiiciga ah ee dalkeeda si ay uga faa,iidaysato.
Qorshaha dhismaha biya xidheenka ugu wayn Ethiopia great Millennium, muran badan buu keenay oo dalalka dariska qaarkood iyo qaar ka mid ah dalalka galbeedka oo si kale wax u arkaya. Ethiopia dhag uma dhigin waxayna dhinaca saartay dalka Shiinaha iyo shacabka Ethiopia gude iyo dibadba.
Si ay dawladu lacag ugu hesho dhismaha biyo xidheenka uguna gaadhsiiso si cadaalad ah dadweynaha Ethiopia meel kasta oo ay joogaan ka qayb galka dhismaha biyo xidheenka, waxay dirtaa masuuliyiin dawlada ah.
Taariikhda biyo xidheenada Ethiopia iyo shirkado badan oo kale waxay ku dhisan yihiin saamiyo [shares], nasiib daro iyo nasiib wanaag mid ay tahaybana waa markii ugu horaysay taariikhda Ethiopia ee dadweynaha Somalida Ethiopia loo soo bandhigo ka qayb galka arimaha dhaqaalaha dalka Ethiopia.
Safarka madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia ku tagay Ingriiska wuxuu ku dhisan yahay ka dhaadhicinta Qurba-joogta degaanka Somalida Ethiopia iibsashada boondhka biya xidheenka [Great millennium dam of Ethiopia].
Arinta kale ee socdaalka Madaxweynahu waa arimo siyaasadeed oo la xidhiidha dhamaystirka xidhiidhkii dhexmaray madaxweynaha iyo ururka mucaaradka ah ee ka dagaalama degaanka Somalida Ethiopia.
Iibsashada boondhiga biya xidheenka Abay waxba kama gadisna boondhiga caalamiga ah ee la iibsado. Laakiin, waxaa suurto gal ah in dad badani ay isweydiiyaan sidee baan ugu aamin karaa hantida dal Afrikaan ah oo ay isbadali ku iman karo, baahina ka jirto.
Taariikh ahaan siyaasada dalka Ethiopia ma saamayso shirkadaha dhaqaalaha dalka u abuura kuwa gaarka iyo kuwa dadweynaha midna [private and public companies].
Qofka saami ka iibsada shirkadaha Ethiopia, wuxuu wax ka yeelan shirkada uu saamiga ka iibsaday wixii macluumaad ah iyo faa,iidada shirkada waa lala socodsiiyaa ruuxa sanadkiiba hal mar.
Tusaale shirkada Jaadka gaysa Jabuuti waa saamiley isugu jira reer Dire dawa ah iyo reer Jabuuti waxaana la sameeyey sanadkii 1980, saamilayduna waxay qaataan qaybta faa,iidada [dividen yield] sanadkiiba hal mar.
In kasta oo dadweynaha Somalida Ethiopia kaga kalsoonaan lahaayeen iibsashada boondhiga biyo xidheenka Abbay, boondhi ay ka iibsadaan biyo xidheen laga sameeyo wabiga shabeele ee degaanka Somalida Ethiopia.
Hadana arintan iibsiga boondhigu dhiiri galinteeda iyo soo jiidashada dadweynaha Somalida Ethiopia, si ay u iibsadaan boondhiga biyo xidheenka Abbay, waa mid u taal dawlada iyo dadka hawsha ku jira.
rasaasa.com waxay leedahay geedkaad labaatan jirka ku beerto lixdan jirka ayaad hadhsataa, waa taas micnaha saami iibsashadu.
Dagaal Maanta ka Dhacay Qansaxle